MAPISAREMA 9 Mharidzo Yevhesi Ndima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Mapisarema 9 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
Mukudzidza kwanhasi kweMapisarema, tinenge tichitarisa paPisarema 9 meseji ndima nendima. Mapisarema 9 rwiyo rwekuonga uye kuziva kururamisira kwaMwari kusingakundiki. Iye munyori, achienda nekufambira mberi kwepfungwa dzake anoita kunge akasangana kana kusangana naMwari seakaruramiswa. Uye neizvi, akaona kuti Mwari anoruramisa vakadzvinyirirwa uyezve nekuona kuti vakaipa havaregi kurangwa. Mapisarema 9 iro meseji ndima nendima zvakare inoburitsa kuti Mwari mudziviriri weavo vanorarama zvakanaka asi vachiitirwa zvisina kunaka. Wezvamapisarema anoziva izvi pasina kukahadzika uye nekuda kweizvi anogona kuenda nechivimbo kuna Mwari kuti amununure kubva mumaoko ake vadzvinyiriri.
Izvi zvakafanana kune vakawanda. Dzimwe nguva tinozviwana tiri mumamiriro ezvinhu apo patinobatwa zvisina kukodzera neavo vanotipikisa kuti tirarame zvakanaka. Nekudaro kune vazhinji vedu, isu tichiri kuti tinzwisise zvizere hurongwa hwaMwari hweruramisiro isu vana vake, uye nekuda kweizvozvo, isu tinoramba tichienderera mudanho redzvinyiriro nguva nenguva. Sezvaunoverenga kuburikidza nehuchapupu hwomunyori wepisarema muna mapisarema 9 kubva pandima nendima, unonzwisisa rudo rwaMwari uye kuda kwake kukutsigira kubva pane zvese zvisina kukodzera zviito zvakatarwa kwauri.
PSALM 9 KUTSANANYA VESE YEMAHARA.
Ndima 1 ne2: Ndicharumbidza ipapo, Ishe, nemoyo wangu wese; Ndicharatidza mabasa enyu ese anoshamisa. Ndichafara nokukufarirai kwazvo; Ndichaimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza, imwi Wekumusoro-soro.
Zviripachena kuti munyori wepisarema apa akaona kunaka kwaMwari muhupenyu hwake uye akatadza kuramba achirumbidza. Ainge akagadzirira kurumbidza Mwari nemoyo wake wese; Mune mamwe mazwi, nezvose zvaainazvo. Izvi ndizvo zvaunoita kana uchinge wanzwisisa uye uchinge wasangana neruramisiro yaMwari muhupenyu hwako. Sezvineiwo, iye akatova nemabasa ekuiratidzira, aive neuchapupu! Uye izvi zviratidzo ndedzipi? Tichavaona mundima dzinoenderera.
Ndima 3: Kana vavengi vangu vachidzokera shure, vachawa ndokuparara pamberi penyu.
Ichi chirevo chekuvimba chinouya kubva muchiitiko. Mwari wedu ane simba rose uye mukuru kukunda chero simba ripi zvaro rakambovapo. Vavengi vedu vacharamba vakafuratira paanotirwira. Izvi ndizvo zvakaonekwa nemunyori wepisarema zvakamupa chivimbo chakakura. Haana kuda kunetsekana nekuvapo kwevavengi vake nekuti aive nechokwadi chekuti vachazoparara.
Ndima 4: Nekuti makachengetedza kutonga kwangu uye mhosva yangu;
Iri nderimwe rebasa rakaratidzirwa nemunyori wepisarema. Aive aona Mwari achitonga chaicho pachinzvimbo chake. Kumuonesa uye kumufadza pakutonga. Uye kwete pane imwechete dhimoni, asi zvinowirirana. Mwari akanaka uye akatendeka pakutonga kwake uye akagadzirira kutonga vana vake nguva nenguva.
Ndima 5 ne6: Makatuka vahedheni, mukaparadza vakaipa, Makadzima zita ravo nokusingaperi-peri. Haiwa iwe muvengi, kuparadzwa kwasvika kumagumo makaparadza maguta; kurangarira kwavo kwakaparara pamwe chete navo.
Dzimwe nguva tinofunga Mwari achibvumira vakaipa kuti vafambe nenzira yavo asi ivo vakarurama vane nguva yakaoma kuti vasimuka navo. Asi pano, tinoona kuti kutendeka kwaMwari uye rudo rwake kune zvakangoita iye kuti aparadze vakaipa kusvika padanho rekudzima zita ravo kubva kuzvizvarwa. Uku kwaive kupupura kwemunyori. Aive aona Mwari achitsiura vese vanhu uye marudzi aiita zvisirizvo uye aive nechokwadi chekuti achazviita zvekare. Ainyatsoziva kuti vavengi vake vaizotongerwa zvachose. Izvi zvinotiudza saka kuti kunyangwe vanhu vakaibata zvisina kunaka sei isu, Mwari anogara achiziva kutsiura uye kana achizviita, zvinoramba zviripo.
Ndima 7 & 8: Asi ishe anogara nekusingaperi; akagadzira chigaro chake choushe kuti atonge. Iye achatonga nyika nokururama, Achatonga vanhu zvakafanira.
Pano zvakare Mwari anoratidzwa kwatiri mutongi akarurama; iye anotonga mukururama. Anoramba akatendeka kune zvaakatonga nguva nenguva kunyange kana zvinhu zvese zvikatadza. Anotonga vari vaviri mumwe uye marudzi maererano nemabasa avo. Izvi zvinofanirwa kushanda sevimbiso kune isu vana vake kuti Mwari wedu haambokundikani uye ari kuenda kune zvese zvakanaka izvo zvine chekuita nesu mumwaka wakakodzera.
Ndima 9: Jehovha anozova mutongi wevanodzvinyirirwa, Utiziro panguva yeKutambudzika.
Maitiro aMwari eruramisiro haana kungoenderana nesimba kana chiremera chaainacho, asi parudo rwababa rwaanarwo kwatiri. Ichi ndicho chikonzero senzira yekururamisa vakarurama, achivadzivirira. Anovachengeta vari kure nevadzvinyiriri vavo, achivadzivirira kuti vasatombosvika pedyo. Iye zvakare anoona kuti vanochengetedzwa pakunetseka panouya kugogodza. Iye anoziva kuti vadzivisi vavo vaizouya shure kwavo uye nokudaro anovimbisa kuti vanochengetedzwa zvizere uye vanochengetedzwa.
Ndima 10: Uye vanoziva zita renyu vanovimba nemi, nekuti imi, Ishe, hamuna kurasa vanokutsvakai.
Zvirokwazvo !!! Vazhinji sevakaziva Mwari semutongi ane mhosva zvechokwadi vanovimba naye. Vakamupupurira achivanunura kubva mumaoko evavengi vavo. Vamuona achisimbisa ivo zvakaringana uye ikozvino vanogona kuve nechokwadi chekuti aizozviitazve. Haasati ambosiya chero munhu anovimba naye zvizere uye haazombofi!
Ndima 11: Imbirai nziyo dzokurumbidza, iye anogara paZiyoni; paridzirai vanhu mabasa ake.
Pakushamiswa kwekuvimbika kwaMwari nekururamisira, munyori wepisarema anodaidzira nyika yese kuti iimbe rumbidzo dzaMwari uye vagovane uchapupu hwezviito zvake kune vese uye vamwe vazhinji. Izvi ndizvo chaizvo zvaunofanira kuita kana iwe ukatanga kuona kururamisira kwaMwari muhupenyu hwako uye nezvinhu.
Ndima 12: Paanobvunza zveropa, iye akarirangarira; haangariri kuchema kwevanyoro.
Mwari vanorangarira avo vanochema kwaari kururamisira kweropa ravo rakateurwa. Anotsiva kuuraya kwavo uye anoda ropa kubva mumaoko avo vakavauraya. Haatarisi kure nevakarurama nevanozvininipisa pavanochema kwaari kuti vabatsirwe. Iye akatendeka zvese uye kungokanganwa kuchema kwavo.
Ndima 13 & 14: Ndinzwirei ngoni ishe; rangarirai kutambudzika kwangu kwandinotambudzika nako ivo vanokuvengai, imwi munondisimudza pamasuwo erufu. Kuti ndiparidze kurumbidzwa kwenyu kose pamasuwo omukunda weZiyoni; Ndichafarira kuponesa kwenyu.
Imwe yemavara makuru ehurongwa hweruramisiro yaMwari itsitsi; tsitsi dzake uye kugona kwake kutarisa kure nezvikanganiso zvedu. Ichi ndicho chikonzero kunyangwe isu tichiziva kana rudo rwake kwatiri tinofanirwa kugara tichitsvaga tsitsi dzake kana tichishuvira kururamisira kwake tichiziva kuti hatina kukwana. Tinoda tsitsi dzake kuti atinunure kubva kumatambudziko edu uye nekudzvinyirirwa kwevavengi vedu. Ipapo chete ndipo patinogona kuratidza kurumbidzwa kwake pamberi pevanhu. Zvakare, Mwari anofarira kurumbidzwa kwedu uye achave nechokwadi chekuti isu kubva pakudzvinyirirwa kose kuitira kuti timurumbidze.
Ndima 15 & 16: Vahedheni vakanyudzwa pasi mugomba ravakange vagadzira: Mumakumbo avo mavakange akaviga tsoka yavo inobatwa.
Ishe anozivikanwa nekutonga kwaanotonga: Akaipa anoteyiwa pabasa remaoko ake. Sechikamu chegadziriro yake yekururamisa vakarurama, Mwari anovimbisa kuti vakaipa vanokohwa chibereko chebasa ravo. Kunyangwe hazvo vachironga vakarurama, Mwari anoona kuti ivo ndivo vanowana zvizere muzvirongwa izvozvo.
Ndima 17: Vakaipa vachadzokera kugehena, uye ndudzi dzinokanganwa Mwari.
Uku ndiko kuenda kwavose vanogara vakaipa uye vasina mhosva, vese vanhu nendudzi. Mwari anotema kururamisa kwake pavari uye anovaendesa kugehena.
Ndima 18: Nekuti anoshayiwa haangakanganikwi nguva dzose: Tariro yavarombo haingazoperi nekusingaperi.
Kana ari pamusoro pekutambudzika kwevakaipa, vakarurama vanozopedzisira vayeukwa. Iko kutarisira kwavo kwenguva refu kwekupedzisira kunozozadzika. Mwari anozovarangarira mururamisiro yake uye azadzise zvese zvavanoda.
Ndima 19 & 20: Simuka, Ishe; munhu ngaarege kukunda; vahedheni ngavatongwe pamberi pake. Vaitei vatye, imi Jehovha;
Kuti marudzi azive kuti angova vanhu. Mushure mekunge munyori wepisarema apaura kutenda nekutaridza mabasa anoshamisa eruramisiro yaMwari, anobva amudaidza kuti aratidze simba rake kuvanhu. Anodaira kuti Mwari havafanire kutendera vakaipa kuti vaite zvavanoda asi kuti avaratidze kuti ivo vanongova vanhuwo zvavo. Sezvo tanzwisisa kururamisira kwaMwari kuburikidza neichi chimwe chinhu, isu tinogonawo kumudana kuti aite zvakafanana panzvimbo yedu.
Heano mashoma mashoma emamiriro ezvinhu aunofanirwa kushandisa iri pisarema.
Paunoda kubvuma Mwari kuti akupe Kururamisira pamusoro pevadzivisi vako.
Paunenge uchidzvinyirirwa zvisirizvo uye iwe uchida kuti Mwari vareverere.
Apo vavengi vako vanouya shure kwako uye iwe unoda nzvimbo yaMwari yekudzivirira uye kudzivirirwa.
Paunonzwa kusiiwa kunyangwe mushure mekunge waisa kuvimba kwakawanda munaMwari.
Kana iwe uchitsvaga kutsiva kwekuparadzwa kana kufa kusiri kwechokwadi kwemudiwa.
Paunoshuva tsitsi dzake munguva dzekutambudzika.
PSALM 9 MINAMATA.
Kana iwe ukazviwana iwe uri mune imwe mamiriro ezvinhu apo iwe waunoda kushandisa iyi pisa, saka heino mimwe mapesita ane simba mapfumbamwe 9 minamato iwe yaunofanira kunyengetera.
Ishe ndinokutendai nekuti munogara muchiita zvakanaka nekupa mubayiro kune vakaipa. Saka ini ndinokumbira kuti mutonge avo vese vanopesana neni uye mundipe kukunda kwavari muzita raJesu.
Baba ndinotsvaga tsitsi dzenyu pamatambudziko ese ari muhupenyu hwangu, ndinunurei kuti ndive nerusununguko rwekurumbidzai nguva dzese muzita raJesu.
Ishe ndinokumbira kuti munditsivire vavengi vangu vese uye nevazhinji vanditsamwira pasina chikonzero muzita raJesu.
Simuka Ishe zvinoenderana neshoko rako uye usaite kuti vavengi vangu vandikunde, zivisa kwavari kuti ndimi Mwari wangu uye kuti ivo vangoriwo vanhu muzita raJesu.
Baba sekureva kwamakandiudza muporofita uyu, vavengi vangu ngavadye muchero weuipi hwavo uye hurongwa hwavo ngahudzoserwe kwavari muzita raJesu.
Mundirangarire nenguva yakafanira. Tarisiro dzangu dzirege kuzadzika muzita raJesu.
Previous nyayaMapisarema 23 Kunyengeterera Kwekudzivirira Uye Kudzivirira
inoteveraPisarema 24 rinoreva vhesi nendima
Minyengetero inopesana neZvavanofunga Pfungwa